Ka dhig Mawduucaaga mid cusub! Ay Kujiraan Faallooyin | Martech Zone
Sunday, May 11, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Weligay maan sameynin isbarbar dhig 'madax ilaa madax' ah oo qoraal bar ah oo lagu qoray taariikh iyo mid aan lahayn taariikh la soo bandhigay. Ka dhaaf DoshDosh, Waxaan ogaaday inay taariikh ku leeyihiin faallooyinka, laakiin taariikhdu waa meel aan laga helin boostada lafteeda. Waxaan rumeysanahay in tani ay tahay mid ka wanaagsan habka aan u adeegsado boggeyga, halkaasoo aan ku leeyahay taariikh aad u muuqata labada URL iyo taariikh muuqaal ah. Kaliya saacada dib uma celin karo hadaan shaqo badan qaban!
Ganacsiga iyo tikniyoolajiyaddu waxay ku socdaan xawaare aad u sarreeya oo ah in dhajinta blog-ka ee hal sano jir aan laga yaabaa in lagu dabaqo maanta. Haddii aan arko qoraalo kooban oo maqaal ah, waxaan inta badan xushaa taariikhda ugu cusub ee ku jirta xirmada oo aan iska indhatiro kuwa kale.
Bogga Cusub iyo Matoorada Raadinta
Xaqiiqdii waxaa jira kuwa kale oo badan oo sidan sameynaya sidoo kale, taas oo aan aaminsanahay inay ka muuqato natiijooyinka raadinta. Raadi Raadinta Google Blog natiijooyinkana waxaa loo kala soocaa sida ay u kala horreeyaan. Xitaa gudaha Google, waxaan badanaa ogaadaa in qodobbada cusubi ay udhowyihiin natiijada ugu sareysa. Waxaan sidoo kale ogaaday bloggers kale oo badanaa 'dib u daabaca' waxyaabaha ku jira - maqaallada 2 ku dhowaad isku mid laakiin mid dhowaan la daabacay. Inkasta oo ay ka kooban yihiin ku dhowaad isku mid, maqaalka cusub ayaa ka muuqda meel u dhow dusha sare!
Bogga Cusub ee Faallooyinka awgood
Ma rumaysan karo inay tahay wax iska yimid in qoraalladayda ugu caansan boggeygu ay yihiin kuwa leh silsilado isdaba joog ah oo faallooyin ah. Waxyaabaha isticmaalaha soo saaray, sida faallooyinka, 'cusbooneysii' qoraallo qoraal ah adoo sababaya isbeddel ku yimaada maadooyinka makiinadaha raadinta ka dibna dib u cusbooneysiiya Marka la soo koobo, faallooyinka ayaa ka dhigaya waxyaabahaaga 'cusub' akhristayaasha iyo matoorada raadinta.
Adeegyada faallooyinka waxay dilayaan Freshness-kaaga
Waxaa jira wax badan a buzz on ka yar faalloonaya adeegyada baxay on ka suuqa sameynaya arrin an saamaynta. Fahamka tikniyoolajiyaddan ayaa muhiim ah, in kastoo!
Dhibaatadu waxay tahay in Bot Search, oo ah matoorada barnaamijka ee matoorada raadinta, waa ma biraawsar! Raadinta Bot waxay sameyn doontaa codsiga (D) ee boggaaga waana halka ay ku joogsato. Iyadoo aan loo eegin inta nuxurka weyn ama nuxurka cusub lagu soo kordhinayo faallooyinka, Mashiinka Raadintu waa iska indho-tirnaan maxaa yeelay weligiis ma codsado macluumaadkaas. Boggaagu waa duugoobay oo waa la iloobay.
Rajo ayaa jirta!
Adeegyadan ayaa si aad ah u adag oo xiiso leh in la isticmaalo, markaa anigu kama wada garaacayo. Shakhsiyan, si fudud uma aaminsani in astaamaha nidaamyadan ay ka miisaan badan yihiin faa iidooyinka ku jira isticmaale-curiyaha iyo ku habboonaynta mashiinka raadinta. Hagaajinta ayaa ah in la horumariyo Isdhexgalka Barnaamijyada Barnaamijyada Adeegyada (F). Sidan, adeegeyga websaydhku wali wuu soo bandhigi karaa faallooyinka isticmaale AMA mashiinka raadinta iyo boggeygu wuu ka faa'iideysan doonaa.
Adeegyo faro ku tiris ah oo adeegyadan suuqa ku jira, waa inaad isweydiisaa:
sidee u maamushaa una maamushaa dhawaajiyaan of aad waxa ku jira waxay iska leedahay
Haddii ay shaqada ka baxaan, sidee baad uga soo kaban kartaa macluumaadkaas? Haddii aad go'aansato inaad ka tagto adeeggooda sideed uga soo kabanaysaa waxyaabahaas? Waxay noqon kartaa fool xun!
Anigu waxaan ahay softiweer ah xirfadle Adeeg, sidaa darteed waxaan aaminsanahay faa'iidooyinka codsiyada koox saddexaad sida tan oo kale si loogu maareeyo howlaha si hufan. Xaaladdan oo kale, waxaan rabaa inaan hubiyo inaan si buuxda uga faa'iideysto faallooyinka lagu soo qoro boggeyga, in kastoo! Hadday dhanka server-ka aadaan, waxaa laga yaabaa inaan ku beddelo fikrad, laakiin illaa iyo hadda waan hagaagayaa.
Wow, ma aanan helin wax faallooyin ah oo tilmaam ah oo tani waxay ahayd mid waxtar leh oo ka baxsan xog-warran (mararka qaarkood). Waad ku mahadsantahay dhajinta macluumaadkan Doug!
ma fiirisay SezWho?
Waxaan bixinnaa waxqabadyo dheeri ah oo dheeri ah oo laxiriira waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaashu, sikastaba waanu kordhinayna nidaamkaaga faallooyinka ee jira - ma badalayno. Waxaan jeclaan lahaa inaan helo ra'yigaaga…
Xaqiiqdii waxaan siin doonaa adeeggaaga fiirin labaad. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad si muuqata uga soocnaato adeeggaaga kuwa kale! Waxaan u maleynayaa in dad badani u maleynayaan in nimankiinnu ay yihiin sida kuwa kale.
Barbara Ling (oo loo yaqaan Owlbert)
Taasi waa maqaal aad looga fiirsado. Waxaan u maleynayaa inaanan laheyn taariikhda boostada macno badan ayey sameyneysaa, sidaas darteed aniga lafteyda ayaan hirgaliyay. Maaha wax adag in la sameeyo - waa inaad cusboonaysiisaa single.php oo aad ka saartaa tixraacayaasha php ee taariikhda.
Marka laga hadlayo adeegyada faallooyinka, weligay fikir kama siin. Kaliya waxaan haystaa si toos ah oo toos ah oo faalig ah oo faallo ka bixinaya boggeyga. Waa inaan sidoo kale ka fikiraa.
Xaqiiqdii ma waxaad dhaheysaa inay caadi tahay inaad tirtirto taariikhaha (oo aad jeclaan laheyd inaad laheyd) maxaa yeelay taariikh yeelasho waxay muujineysaa da'da qoraalada hore?
Marka haddaan ku dhuuqo taariikhda uu ku dhacayo kartoonkayga caanaha miyaanay kharribmin?
Fadlan ka tag taariikhaha kaligood (si kasta oo ay u muuqdaanba halkan way ku wanaagsan yihiin)… oo yaanan ku dhiirrigelin kuwa kale inay qaataan dhaqankan runti xun. Way ku xun tahay isticmaaleyaasha ugu dambeyntiina kuwa sameeya waxaa lagu tuurayaa iftiin xun.
Xusuusnow qorayaasha wax qora ilaa hadda: Haddii aad rabto sii wadista taraafikada bartaada, sii wad qorista waxyaabo aad u wanaagsan. Ha isku hallayn adiga isticmaaleyaasha si aad u joogteeysid taraafikadaada.
Dhamaan hareeraha cabsi gariirrada halkan ka socda, Doug. 🙁
Waxaad ku dhejinaysaa xumaanta noocaas ah. Sinnaba ugama jeedin inaan muujiyo daacad la'aanta. Xooshsh waa goob weyn oo leh waxyaabo fantastik ah, mid cusub iyo mid duug ah! Waxaan rumeysanahay in qoraalladooda 'taariikh' ah ay u oggolaanayaan iyaga inay in badan sii dheeraadaan, in kastoo.
Haddii aan qoro maqaal ku saabsan qaaciddooyinka 'Excel' oo waa maqaal aad u fiican, dhibaatadu waxay tahay in Mashiinnada Raadintu ay helaan maqaal 'cusub' ka dibna ay dhinacayga iska tuuraan. Dadku waxay booqdaan degelkeyga oo waxay arkeen inay sanad jirsatay waxayna u muuqdaan inay raadinayaan wax cusub - inkasta oo laga yaabo in waxyaabaha ku jira ay ka fiicnaadaan.
Tani waa sababta sababta, haddii aad fiiro gaar ah u yeelato qaar ka mid ah qorayaasha wax qora ee internetka wax ku qora (adoo adeegsanaya taariikho), waxay u muuqdaan inay dib u soo celinayaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin marar badan. Waxyaabaha cusubi waxay haysaa taraafikada mashiinka raadinta - taas oo kuu oggolaanaysa inaad kobciso akhriskaaga.
Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay, nuxurka weyn markasta wuu adkaan doonaa. Waxaan kaliya ogaanayaa inaad adigu naftaada u galinayso qasaaro adoo 'dhicinaya' waxyaabaha wali u qalma in laga fiirsado!
Faallooyin wanaagsan, Matt!
lol @ shar xumaan. Taasi waa hal shay oo aan ku fiicanahay [xun?]: Aragtida waxa ugu xun ee wax walba. (Shirkad dejintu waa xirfad qiimo leh, waxay ka baxaysaa PR xun… aad baan uga xumahay train Waxaan naftayda u tababbaraa si aan u arko waxyaalaha xun xun oo maalin kasta waxaa laygu dhiirrigeliyaa inaan raadiyo xagal ugu xun… si markaa ay u noqoto waxa aan ku soo qaato.)
Uma aan tixgelin qorayaasha wax qora ee dib u soo celiya waxyaabaha ay ka keeneen sidii qoraal cusub si ay ugu muuqdaan kuwo cusub. Dabcan, waxaan arki lahaa iyaga oo lagu tuuray isla ileyska icky. (Malaha iftiin ka sii xun, xitaa… maaddaama hooska dhaqankaas uu si cad u muuqdo.)
Iyada oo laga jawaabayo tusaalaha qaababka Excel… Haddii blogger-ku uu rakibay nidaamka faallooyinka xisbiga 3aad oo uu taariikhaha meesha ku dhaafo isla markaana uu doonayo in maqaalku ahaado "mid cusub" waxaan soo jeedin lahaa si caadi ah in loo cusbooneysiiyo jirka boostada 3-6 biloodba mar. Ku darista waxyaabaha sida "Cusbooneysiinta: * Joe Schmo * waxay la timid 2 * qaaciidooyin kale oo xisaabinta meydka ah". (Meesha ay ku qoran tahay astaanta xidiguhu sidaas ayey ku xidhan tahay.) Tani waxay ku siin doontaa boggaaga "cusboonaysiinta" kor u qaadista mashiinnada raadinta iyo sidoo kale in aad siiso xoogaa xiriirinno dheeri ah bogagga kale ee bloggers (kuwaas oo u muuqda in la isku celceliyo iyaga oo abuuraya shabakad ballaadhan taas oo iyaduna dhinaceeda ah) waxay kuu horseedaa nuxur / fikrado cusub… sida-guul-guul-guul.Waad guuleysataa, akhristayaashaada ayaa guuleysata, iyo boggaga kale ee wax qora ayaa guuleysanaya. Waxaan ku dhowaad tegi lahaa in aan idhaahdo habkaas ayaa u wanaagsan qof walba in uu ka dhigo waxyaabaha kale Dhaqan xun. Iyagu waa dhaqan xumo sababtuna maaha inay ku dhexjiraan ujeeddo xun (sida nuxurka dib-u-haynta ay tahay), laakiin maxaa yeelay waxaa jira xulashooyin waxtar weyn u leh qof walba.)
Waad ku mahadsantahay faallooyinka dabagalka ah. Hadda waxaan isku qorayaa quudintaada. 🙂
(PS Ma aha in la noqdo nit-picky… laakiin uber-peeve kale waxaan hayaa xisbigaas 3aad Faallooyinka Nidaamyada hagaajiya: Faalladayda hore hadda waxay ku leedahay Text-link-ad adigu. Sababta oo ah waxyaabaha sida Disqus oo kale kuma xirna waxa kujira bogga inta lagu gudajiray codsigii hore ee serverka 'looma badalo' qoraalada xiriiriye-qoraalka ah. hehehe. Tani waa mid aan la daboolin, anigu waan ahay.Waxaan hoos ugu dhaadhacayaa taariikhda douglasskarr.com anigoo ah troll / caban. lol.)
Kaliya si aad u badbaado - taasi waa xayeysiis Kontera ah, ee ma ahan Xayeysiiska Text Link. Te Kontera waa 'mashiinka raadinta oo badbaado leh'. Xayeysiiska Text Link waa koofiyad madow.
Marnaba kuma fikirin inaan faallooyinka ka dhigo mid xaddidan xayeysiisyada Kontera, laakiin waan jeclahay fikraddaas. Halkaas ayaan ku sameyn doonaa daqiiqad gudaheed!
Kormeerka Taleefanka Gacanta
Mar 1, 2012 at 3: 04 AM
nuxurku waa inuu hubiyaa darajo bog sare ah, haddii websaydhku leeyahay waxtar iyo waxtar
macluumaad. Akhristayaal badan oo gaar ah ayaa soo jiidan doona boggaaga sidoo kale.